Mmiri na -agba mmiri dị elu kwụ ọtọ Ụdị okpukpu abụọ Wall Corrugated Pipe Extrusion Line - China Akwa ọsọ mmiri jụrụ kwụpụta Ụdị okpukpu abụọ Wall corrugated Pipe Extrusion Line Supplier, Factory –Jwell
● A na-eji alloy aluminom eme ogwe aka ya, elu ya na-eguzogide. Enwere ike gbakọọ mgbawa ọkpọ ahụ site na mmemme ngwanrọ pụrụ iche, enwere ike nweta mgbanaka mgbanaka n'otu nha.
● A na-etinye mmiri jụrụ oyi na ngalaba na-akpụpụta na nloghachi (ụdị dị n'ahịa a na-ajụ oyi na enweghị mmiri).
A -machine igwe na -akpụzi nwere usoro pụrụ iche iji mee ka mbelata pipụ dị mma (yana nchedo patent).
Machine Igwe na -akpụzi nwere usoro pụrụ iche iji gbochie mbuli elu nke ọma wee hụ na modul ahụ agaghị emebi (yana nchedo patent).
Akwadoro n'elu ikpo okwu nwere ngwaọrụ ntuziaka, nke nwere ike nweta nnabata synchronous nke isi ebu.
● Enwere ike imezi nkwụsi ike nke oghere site na igbe oghere nke igwe ịkpụzi.
● Ejiri igwe na -akpụzi nwere ike nchekwa ndabere, nke nwere ike hụ na mwepụ nke ngwa ahụ n'ọnọdụ nrụpụta ma ọ bụrụ na ike daa na mberede igbochi mkpọchi.
● Ọdịdị pụrụ iche nke tray mmiri nwere ike hụ na mmiri jụrụ oyi dị elu gbanyere n'ime modul (yana nchedo patent).
● A na -ahazi mmegharị nke etiti etiti na etiti elu ọkụ eletrik.
ụdị Pipe size (mm) Oke. Ọsọ (m/min) Ike niile (KW)
Ndị otu ahịa
Mpempe akwụkwọ PC PMMA GPPS & Line Extrusion Plate
TPO PVC Eva Pee Waterproof Sheet Extrusion Line